यी ५ राशि हुने मानिस हुनछन सबैभन्दा चलाख र बुदिमानी !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ५ राशि हुने मानिस हुनछन सबैभन्दा चलाख र बुदिमानी !!
तुला राशिः हरेक समस्याको सहजै समाधान निकाल्न तुला राशि भएका मानिसहरू आफ्नो बुद्धिमानीको कारण नै चिनिन्छन्। यो राशि भएका मानिसहरू आफ्नो स्तरमा आइडिया सोच्ने गर्दछन् र यसलाई एक अलग ढंगले प्रदर्शन गर्दछन् । यदि कुनै सोचलाई परिवर्तन गरी केही नयाँ काम गराउने सोच्नुहुन्छ भने यसको लागि तुला राशि भन्दा राम्रो कुनै राशि हुनसक्दैन ।
तुला राशि भएका मानिसहरूसँग हरेक समस्याको समाधन हुन्छ। जब कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएमा यस राशिका मानिसले हरेक किसिमले समाधान निकालेर नै छोड्छन् । यस राशिका मानिसहरू एकदमै मिलनसार मित्र र राम्रो सल्लाहकार मानिन्छन्।
कुम्भ राशिः: राशिको मानिसहरू सबैभन्दा बढी समझदार हुन्छन् किनकी यी मानिस हरेक स्थिति अनुकूल नै निर्णय लिन्छन् । यस राशिका मानिस सबैभन्दा अलग सोचका हुन्छन् । यिनिहरूको दिमागमा सधैँ अलग र क्रिएटिभ आइडियाले जन्म लिन्छ । यो राशि भएका मानिस आफ्नो कुशलतालाई देखाउन कहिलै पछी हट्दैनन् । यी मानिसहरूमा सबैको मनमा राज गर्ने कौशल हुन्छ । यिनीहरू ज्ञानको धनि हुन्छन्, आफ्नो गहन ज्ञानको कारणले यी मानिस हरेक समस्याको कुनै न कुनै हल निकाल्छन्।
कन्या राशिःआलोचक र विश्लेषक ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कन्या राशि हुने मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यिनीहरू ज्यादै बुद्धिमानी हुन्छन् । यी मानिसहरूले उचित अवस्थामा मात्र प्रतिक्रिया जनाउँछन् । यिनीहरू एक–एक गरि आफ्नो दिमागमा विचारलाई सिर्जना गर्दछन् र सही समयमा नै बलियो रहेको त्यस विचारलाई सबैको अगाडी देखाउँछन् । यी मानिसहरू अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र अगाडी बढ्छन् ।
मीन राशिः यस राशिलाई भावुक राशि भनिन्छ र जब कुरा दिमाग चलाउने आएमा यो राशि भएका मानिसहरू आफ्नो हिसाबले काम गर्छन् । यदि यिनीहरूमा कुनै एकदमै महान विचार छ भने त्यसमा हृदय देखि नै काम गर्छन् र त्यसलाई सबैको सामु ल्याउन अधिक मेहेनत गर्छन् । यी राशि भएका मानिसहरू एक महान बुद्धिको स्वामी हुने गर्छन्।
सिंह राशि; चलाकको राजा सिंह राशि भएका मानिसहरूलाई यदि कुनै यस्ता काम दिनुहोस्, जसमा बढी दिमाग लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । हुनसक्छ कि उनीहरूले पहिलो पटक त्यो काम नबुझे पनि तर हार मान्दैनन् ।
यस राशिका मानिसहरूले थोरै ढिलो समझदारी देखाउँछन् तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि यी मानिसहरू बुद्धिमान हुँदैन । यिनीहरू कुनै पनि काम सोच्नको लागि थोरै समय लगाउँछन् तर यिनीहरूले एक पटक गर्छु भनेपछि त्यो गरेर छोड्छन्। (gnewsnepal.com बाट सभार)
सरकारले खरानीको व्यापार गर्न घर जलाउन खोज्यो : शेरबहादुर देउवा